Achịcha nri nke Cordoba: Site salmorejo ka ejula | Njem akụkọ
La nri nkịtị nke Cordoba Ọ bụ ngwaahịa nke mmetụta abụọ. N'otu aka ahụ, Andalusian sitere na Muslim gara aga na, n'aka nke ọzọ, mbata Ndị Kraịst si n'ebe ugwu nke Iberian Peninsula. Nke mbụ o ji n'ụba ojiji nke ngwa nri dị ka oregano, Mint ma ọ bụ tarragon, ebe e wepụrụ ọtụtụ ntụziaka omenala site na nke ikpeazụ.
na Ngwaahịa nke ụwa bụ isi ihe mejupụtara ya. N'ime ha, ndị ọrụ na-arụkwa oke mkpa mmanụ olive nke ubi ha. Ma anụ ụlọ nke ugwu ya. Kpọmkwem, anyị nwere ike ịmata ọdịiche abụọ dị na Cordovan gastronomy. Oku nkwanye ugwu N'ihi na ọ malitere n'ebe a na-arụ ọrụ ugbo, ọ bụ isi ofe na stew. Kama, ndị site n'ime ime obodo Ọ dabere karịa na nri ndị nwere obi ụtọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu nri ndị Cordoba na-ahụkarị, anyị ga-eme njem nleta nke usoro nri kachasị ewu ewu.
1 Oyi ofe, kpochapụwo na nri a na-ahụkarị nke Cordoba
2 Stews na mmalite
3 anụ obodo
4 Nri ndị ọzọ na-apụta na nri a na-ahụkarị nke Cordoba
5 Ejula, ihe ama ama nke Cordovan gastronomy
6 Azụ sitere na mpaghara ime obodo
7 Ụlọ oriri na ọṅụṅụ si Cordoba
8 Ihe ọṅụṅụ iji soro ụdị nri Cordoba
Oyi ofe, kpochapụwo na nri a na-ahụkarị nke Cordoba
Otu efere nke ajoblanco
Ihu igwe mgbe niile na-emetụta gastronomy nke ebe. Na Cordoba agaghị abụ ihe dịpụrụ adịpụ. Oge ihu igwe ya na-ekpo ọkụ na-akpọ nkwadebe nke ofe ma ọ bụ ude oyi na-eme ka ahụ dị ọhụrụ. N'ihi nke a, ụdị ntụziaka ndị a bụ omenala na nri Cordovan.
Ikekwe nnukwu kpochapụ ya n'echiche a bụ salmorejo. Ihe ndị bụ isi ya bụ achịcha e gwepịara egwepịa, mmanụ oliv, galik, nnu na tomato. Ihe si na ya pụta bụ ude na-atọ ụtọ nke a na-enye gị na ịkpụ ham ma ọ bụ akwa sie ike. Ọzọkwa, n'ihi ihe mejupụtara ya na ụzọ isi ṅụọ ya, ndị ọkachamara na-agụnye usoro nhazi a n'etiti ndị Andalusian gazpachos.
Mana ọ bụghị naanị ofe oyi na-ahụkarị nke Cordoba. Otú ahụ ka ọ dịkwa White garlic, nke a na-eji mmiri, galik, nnu, mmanụ oliv, achịcha, almọnd ala na aka mmanya. N'otu aka ahụ, ha ga-ejikọta ya na egusi ma ọ bụ mkpụrụ vaịn. N'aka nke ọzọ, a kwenyere na mmalite ya tọrọ ọbụna karịa nke salmorejo, ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịmalite n'oge ndị Rom na ọbụna nri ndị Gris.
Stews na mmalite
Mana ọ bụghị ihe niile bụ efere oyi na nri a na-ahụkarị nke Cordoba. Ọ nwekwara ihe ndị ọzọ obi Ezi ntụziaka na ị ga-atọ ụtọ. N'etiti ha, stew nke Fikiere agwa ma ọ bụ boronia na obodo paella. Nke ikpeazụ nwere, na mgbakwunye na osikapa, ham, anụ ezi, ọkụkọ na chorizo ​​​​, yana paprika na cloves. N'otu aka ahụ, stew ndị ọzọ bụ asparagus dị ilu, migas na porridge.
Ma ọzọ ụmụ amaala bụ cordovan ite, stew chickpea mere na paprika, anụ ezi anụ ezi, yabasị, galik, nnu na kabeeji. Dị ka uzommeputa siri ike na ọ bụ, ọ na-adị njikere inye ndị ọrụ ụbọchị nri, ma, ka oge na-aga, ọ ghọwo ihe ochie nke gastronomy nke mpaghara Andalusian.
Rabo de toro, nke a na-ahụkarị nke nri Cordoba
A na-azụ ehi karịsịa n'ugwu Cordoba. N'ezie, o nwere otu n'ime ụlọ ndị kasị ibu na Andalusia nke nwere ehi, atụrụ na ụdị ewu. Ya mere, ọ gaghị eju gị anya na anụ bụ ihe ọzọ na-esi na stew ebe ahụ.
Banyere ha, e nwere efere abụọ mejupụtara nri a na-ahụkarị na Cordoba. Ọ gbasara flamenquines na ọdụ ehi. Ndị mbụ nwekwara nkwadebe dị mfe. Ndị a bụ mpekere nke Serrano ham a kpọkọtara n'okirikiri n'úkwù na, emesịa, bred na eghe. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na aha ahụ, dị ka a kwenyere, sitere na akụkụ ahụ gbatịpụrụ nke ọdịdị ya. N'otu aka ahụ, ndị ọkachamara gastronomy debere isi nri a na obodo Cordoban Bujalance, ọ bụ ezie na ọ gbasaala na Spen.
N'akụkụ nke ya, oxtail bụkwa nri a na-ahụkarị n'akụkụ ndị ọzọ nke obodo anyị. N'okwu ya, a mara usoro nhazi ahụ kemgbe oge ndị Rom, ọ bụ ezie na nkwadebe ugbu a malitere na narị afọ nke XNUMX. Dị ka aha ya na-egosi, a na-eji ọdụ anụ (oke ehi ma ọ bụ ehi) kwadebe ya ma nweekwa tomato, yabasị, karọt, ose, galik, nnu na akwukwo akwukwo. Ọzọkwa, tinye mmanụ oliv na otu iko mmanya uhie.
Nri abụọ a nke anyị kọwara gị bụ ihe kacha mara amara nke nri Cordoba n'ihe gbasara anụ. Ma e nwere ndị ọzọ dị ka anụ ehi na artichokes, nke stew oke bekee, na Nwa atụrụ atụrụ ma ọ bụ ezì na-aṅụ ara. A na-enwekwa ekele maka chanfaina, nke a na-ejikwa atụrụ na ọbara ya, yabasị, galik, akwukwo mmiri na ose chilli. Mana uzommeputa a sokwa, nke di iche, nke ndi ozo spanish kichin na ọbụna Latin America.
Nri ndị ọzọ na-apụta na nri a na-ahụkarị nke Cordoba
Akpụkpọ anụ sitere na Baena
Tinyere nkwadebe ụtọ ndị a dị n'elu, enwere ntụzịaka ndị ọzọ na-atọ ụtọ na nri Cordovan. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere San Jose omelet, nke na-agwakọta àkwá a kụrụ n'ala na achịcha achịcha na saffron pụrụ iche nke na-enye ya agba odo pụrụ iche. Na, n'otu aka ahụ, Baena scramble, na nro galik pulitere.
Ọ dịkwa mma salad nke cordovan, dị ka Russian, ma na oliv ojii si n'ala. Na, dị ka maka akwukwo nri efere, ị nwere eggplants eghe na mmanụ a honeyụ na Artichokes ụdị nke Montillana, nke a na-akwado ya na mmanya sitere na mkpesa Montilla-Moriles, ya mere aha ya.
More ịmata bụ letus garlic, nke a na-akpọkwa obi Cordovan, bụ nke a na-eme site na iji ejiji na ihe oriri nke galik e ghere eghe, paprika, nnu, mmanya na iberibe Serrano ham.
Ejula, ihe ama ama nke Cordovan gastronomy
Snails, nri bụ isi na nri Cordoba
Ọ na-achọ ịmata ihe na-eme ejula na Spen. Ọ bụ ezie na n'ebe ụfọdụ a naghị eri ha, n'ebe ndị ọzọ, a na-ewere ha dị ka nri siri ike. Otu n'ime ndị ikpeazụ bụ Cordoba, nke mere ka ha bụrụ ihe niile ọkọlọtọ nke gastronomy ya, ruo n’ókè nke na a na-eredị ha n’ụlọ ahịa okporo ámá.
N'ezie, enwere ọtụtụ nkọwa ndị emepụtara na obodo Andalusian. Ị nwere ike ịnwale ha na ụdị nri dị iche iche. Ma, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha na-etinyekarị ngwaahịa dị ka tomato, yabasị, ose na-acha uhie uhie, galik, mmanya, mint na ngwa nri ndị ọzọ na nkwadebe ha. Ọzọkwa, ndị a na-ahụkarị na-abụkarị ndị oseose, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-esi nri amalitela ịmepụta usoro ntụziaka ọhụrụ na nke na-atụ egwu. Dị ka ihe atụ, ejula ụdị Roman, sautéed na eels, mmanya na ham eri na ọbụna carbonara.
Azụ sitere na mpaghara ime obodo
Otu efere azụ̀ amịpụtara
Dị ka ị maara, Cordoba enweghị oke osimiri, n'agbanyeghị na ọ nwere osimiri. Mana nke a anaghị egbochi azụ ka ọ nọkwa na ụfọdụ ntụziaka gastronomic ya. Dị ka ọ dị n'akụkụ ndị ọzọ nke Spen, ọ bụ ntakịrị ihe rin-ran, stew tuna na poteto na ose. Mgbe ụfọdụ, a na-ejikwa mkpụrụ nnu nnu akwadebe ya. A na-ejikwa nke ikpeazụ esi nri galik ofe, nke na-eso ya na tomato.
Agbanyeghị, a na-ahụkarị karịa marinated iyak, karịsịa palometa, nke dị na Cordoba e nyere aha pụrụ iche nke "japuta". A na-esikwa ya na paprika dị ụtọ, galik, mmanya mmanya, oregano na ntụ ọka wee sie ya na mmanụ oliv bara ụba. Ma a na-ejikwa marinade na vinaigrette na-eji ejiji ndị a. Na nke ikpeazụ, a na-eri ọtụtụ ihe anchovies.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ si Cordoba
Banyere desserts, ha dịkwa nnọọ iche na gastronomy nke a Andalusian n'ógbè. E nwere ezigbo cheese, n'etiti nke onye si Pedroches, nke a na-eme na ndagwurugwu homonymous, nke dịlarị na Extremadura. Ma, karịa ihe niile, confectionery dị ezigbo mkpa n'ime nri nri Cordoba.
Ụtọ nke nri Cordovan na-ejikọta ihe ndị Andalusian na-ahụkarị na ndị ọzọ sitere na mgbọrọgwụ La Mancha. Nke ikpeazụ bụ, dịka ọmụmaatụ, mkpụrụ osisi e ghere eghe nke pan dị ka eghe okooko osisi, nke sitere na Campo de Calatrava na nke erutela Mexico na Colombia. Kama, ha na-enwekwu obodo Aguilar meringuesnke Donuts sitere na Priego na quince mado si Puente Genil.
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe oriri nke Cordoban confectionery bụ mmanụ aṅụ, sesame na matalahúva. Otú ọ dị, otu n'ime ndị kasị ahụkarị desserts nke Andalusian n'ógbè bụ achicha cordovan, nri dị ụtọ nke sitere na ntutu mmụọ ozi na achịcha achịcha. Na ya onye version, ọ na-enweta aha nke mitten na padding yiri ya na-ebu achịcha dị mkpirikpi.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ nri Cordovan ọzọ, ị nwere ike ịtụ ụfọdụ Porridge dị ụtọ. N'okwu a, a na-eji ntụ ọka, shuga, mmiri ara ehi, anise, lemon, mmanụ oliv na cinnamon mee ha.
Ihe ọṅụṅụ iji soro ụdị nri Cordoba
Mmanya sitere na Montilla-Moriles
Anyị enweghị ike imecha njem anyị nke Cordovan gastronomy n'ekwughị maka mmanya. Anyị ekwuola n'oge gara aga ụka nke mmanya sitere na Montilla-Moriles. N'ime ya ị ga-ahụ ezigbo mmanya.
Ọ bụrụ na ị jikọta otu iko fino na dulce ọzọ (dịka ọmụmaatụ, Pedro Ximénez), ị ga-enwe a iri ise na iri ise, nke a na-ejikarị eme ihe n'obodo ahụ dị ka aperitif. Na, iji mechaa nri dị mma, ị nwere ike ịtụ otu iko Rute brandi, nke sitere na anise ma bụrụ onye a ma ama n'ụwa.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ihe oriri na efere omenala nke nri nkịtị nke Cordoba. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ikwupụta ihe ịtụnanya ndị ọzọ dị ka Serrano ham si na ndagwurugwu Pedroches, nke Pozoblanco soseji, las Black pudding sitere na Fuenteovejuna ma ọ bụ, n'ubi onye anaghị eri anụ, nke cordovan hash, nke nwere naanị kukumba, yabasị, ose, tomato, mmanụ oliv, nnu na mmanya. Ọ naghị adị gị mma ileta ọmarịcha ahụ Córdoba ma nwee obi ụtọ ndị a gastronomic?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Córdoba » Nri a na-ahụkarị nke Cordoba
Okirikiri ala kachasị mma n'ụwa